Hurumende Inonzi Inogona Kuendeswa kuMatare neKuroverera VaMaingehama naVaMadzokere Mhosva Yavasina Kupara
Chikumi 06, 2021
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu Amai Beatrice Mtetwa avo rakamirirawo nhengo dzeMDC dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri VaLast Maingehama naVaTungamirai Madzokere vanoti neMuvhuro vachataura nevatori venhau kuti votora matanho api kuhurumende nekuvakanda mujeri kwemakore vasina mhosva.
Amai Mtetwa vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vaende kumatare iri kuna VaMaingehama naVaMadzokere asi vanoti pane mukana mukuru wekuti vachada kuripwa.
Vaviri ava vange chipomerwa mhosva yekuponda mupurisa VaPetros Mutedza paGlen View 3 Shopping Centre muna 2011.
VaMaingehama, VaMadzokere naMuzvare Yvonne Musarurwa vakazobatwa nemhosva yekuponda nemutongi wedare repamusoro VaChinembiri Bhunu muna 2016 ndokuendeswa kujeri reChikurubi.
Asi mutongi wedare repamusoro soro Amai Rita Makarau vakati vaviri ava havana mhosva zvakapa kuti vabve vaburitswa muhusungwa.
Muzvare Musarurwa vakaburitswa muhusungwa muna 2018 mushure mekupihwa ruregerero nemutungamiri wenyika pakaburitswa vamwe vasungwa. Asi mumwe ainge anziwo ane mhosva Muzvare Rebecca Mafukeni akashaya ari mutirongo akamirira kutongwa.
Vana ava vaive pachikwata chevechidiki veMDC makumi maviri nevapfumbamwe vakasungwa muna 2011 vachipomerwa mhosva yekutema nematombo inspector Mutedza vachibva vashaya. Vazhinji vainge vasungwa ava vakabva vasungunurwa vachinzi Havana mhosva.
Gurukota rezvemukati menyika VaKazembe Kazembe vari kugara vachiendeswa kumatare nemhosva dzekutyorwa kunenge kwaitwa mutemo nemapurisa.
Mwedzi wapera VaKazembe vakapotsa vakandwa mujeri mushure mekunonoka kubhadhara mari inodarika zviuru zana gumi nemakumi pfumbamwe nemapfumbamwe nemazana mashanu kana kuti RTGS 199, 500 kuna VaSimon Mandoza mumwe mudzidzi wekuGweru vainge varohwa nemapurisa muHarare vakangozvimirira havo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna VaKazembe negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo.
Asi VaKumbirai Mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights sangano rakashanda naAmai Mtetwa naVaCharles Kwaramba panyaya yenhengo dzeMDC idzi vanotiwo pane mangwana vanotarisira kuti VaMaingehama naVaMadzokere vajekesere vatori venhau matanho avari kuronga kutora.